'कांग्रेसको नेतृत्वमा नै समस्या छ '
चितवन । नेपाली काँग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म पार्टीले गति लिन नसक्ने बताएका छन्। आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पार्टी संगठन चलायमान हुन नसक्दा ध्वस्त बनेको बताए ।
'निर्वाचन हार्दैमा आत्मबल कमजोर बनाउनु हुँदैन'
चितवन । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतले एक पटक निर्वाचन हार्दैमा आत्मबल कमजोर बनाउन नहुने बताएका छन् ।
किन भयाे काँग्रेसकाे बैठक स्थगन
काठमाडौँ । निर्वाचनको समीक्षा गर्न यही चैत ९ गतेदेखि जारी नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आजदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन भएको छ ।
अन्तिम हतियार प्रयोग गर्ने दाउमा देउवा
काठमाडौँ, १२ चैत । नेपाली कांग्रेसमा अहिले सबैभन्दा रहस्यमय पात्र बनेका छन् महामन्त्री डा. शशांक कोईराला । उनी धेरै बोलिरहको छैनन् ।
गुट अन्त्य गराउन केन्द्रित नेपाली काँग्रेसले गर्याे यस्ताे पहल
नुवाकोट । नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका कोषाध्यक्षको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तीव्र बनाइएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले संघीय संसदीय दलको विधानलाई अन्तिम रुप दिन छलफल शुरु गरेको छ ।
देउवालाई चौतर्फी दबाब, प्रकाशमान सिंहले पनि यसो भने
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काँग्रेस विधिअनुसार चल्न नसकेको बताएका छन् ।
सभापति शेर बहादुर देउवाप्रति शेखर कोइरालाको आक्रोश !
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका नेता डा शेखर कोईरालाले महासमितीको बैठकबाट पार्टी सभापति तथा अन्य कोही पनि नेता डराउनु नपर्ने बताएका छन्।
मेलमिलाप दिवसमै कांग्रेस ३ तिर विभाजित, फुटकाे संकेत
काठमाडौं, पुस १६ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक विपी कोइरालाको तत्कालिन रणनीति राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाइरहँदा कांग्रेसका कार्यकर्ता भने तीन भागमा बिभाजित बनेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामपछि नै चर्किएको आन्तरिक मनमुटाव मेलमिलाप दिवसको अवसरमा छताछुल्ल भएको छ । सोही दिवसको अवरसमा काठमाडौंमा तीन गुटका नेता कार्यकर्ताहरुले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।
चुनावअघि यस्ता थिए कांग्रेसका ४ कमजोरी
काठमाडौं, मंसिर २४ । लामो समय संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस यसपटकको चुनावमा लगभग तेस्रो शक्तिको रुपमा खुम्चिने खतरा बढेपछि यसका नेताहरु आत्मसमिक्षा गर्न बाध्य भएका छन् ।
गोरखा २ प्रदेश ख मा काँग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडी विजयी
गोरखा, मंसिर २३ । क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा ख मा नेपाली काँग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडी विजयी भएका छन् ।
कांग्रेसमा सुरु भयो असन्तुष्टि, नेतृत्वप्रति राजीनामाको दबाव
काठमाडौं, मंसिर २३ । चुनावको प्रारम्भिक मत परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस यसपटक प्रतिपक्षमै बस्ने वातावरण देखियो । अर्थात् कांग्रेस दोस्रो वा तेस्रो ठूलो पार्टी बन्ने शंकेत देखिइसकेको छ । देशभरको मतपरिणाम हेर्दा नेकपा एमाले भने पहिलो ठूलो पार्टी बन्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ ।